Toddobaadka siyaasadda Järva - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Toddobaadka siyaasadda Järva
La daabacay fredag 5 maj 2017 kl 16.27
Toddobaadka Järva oo tartan kula jira toddobaadka Almedalen
Axmed Cabdiraxmaan. sawir: Charles Ludvig
Muddada lagu guda jiro abaabulka Toddobaadka siyaasadda ee jasiiradda Gotland ee lagu magacaabo Almedalen ayaa sidoo kale abaabul la mid ah uu ka socdaa toddobaadka siyaasadda ee nawaaxiga Järva, Politikerveckan i Järva. Waana markii ugu horreeysay.
Axmed Cabdiraxmaan, ahna shakhsiga ka dambeeyay toddobaadka siyaasadda ee nawaaxiga Järva, ayaa sheegay in fikirkiisu aannu ahayn sidii uu tartan ula geli lahaa Visby, hase yeeshee uu yahay mid dhammeeys-tiraya, sida uu sheegay:
– Waa tallaabo lagu abuureyo masrax suurtagal ka dhiga goob wada-hadal ee siyaasiyiinta qaranka ee xisbiyada kala duwan iyo bulshada nawaaxigaa ku dhaqan. Toddobaad u suurtagelinaya bulshooyinka kala duwan ee caalamka ka soo jeeda sidii ey qayb uga qaadan lahaayeen siyaasadda Sweden, isla-markaana kor loogu qaadi lahaa howlaha codeeynta iyo ka qayb-galka siyaasadda, sida uu sheegay Axmed Cabdiraxmaan. Isaga oo hadalkiisii sii watana sheegay:
- Haddii ey siyaasiyiinta iyo hoggaamiyeyaasha siyaasaddu yimaadaan nawaaxiga Järva, ey bartaan bulshada ku dhaqan nawaaxigaa, wax ka ogaadaan cawaaqibta hor-taagan. Waxaa marka muhiimad ku fadhida in siyaasiyuuntu ka helaan sawir ka duwan oo dhammeeys-tiraya midka ey har iyo maalin ka hadlaan, sida uu sheegay.
Toddobaadka siyaasadda ee nawaaxiga Järva oo ka dhici doona Spånga taariikhda 10-18 bisha juun ayey sideedda xisbi ee xubnaha ku leh baarlamanku uu xisbi walba maalin ku yeelan doonaa dabadeedna uu ka hadli doonaa goobtaa hoggaamiyaha xisbigaasi.
- Aad iyo aad ayaannu ugu farax-sannahay in dhammaan hoggaamiyeyaasha xisbiyadu ey naga ogolaadeen iney ka soo qeyb galaan. Labada hoggaamiye ee Socialdemokraterna Stefan Löfven iyo Sverigedemokraterna Jimmy Åkesson ayey ahaayeen kuwii ugu dambeeyey ee jawaab naga soo siiya iney ka soo qayb geli doonaan.